VALLOTA: SII KORDHAYA IYO DARYEELKA GURIGA, DHALMO, SAWIR - MAQAALLO
Daryeelidda ubax diimeed
Duufaan kuleyl ah oo ubax leh ubax leh quruxda midabka leh ee quruxda badan ayaa noqon doona quruxda quruxda badan ee guriga. Geeddi waa gebi ahaanba aan qabyo ahayn ee daryeelka, uma baahna xaaladaha gaarka ah ee deegaanka, sidaas darteed way fududahay in guriga lagu koro.
Vallota, ama sidoo kale waxa loo yaqaan "ubax dabka", waa warshad kuleyl ah oo ku taala Amaryllid, oo ku taala Koonfur Afrika. Muuqaalka ugu weyn ee qalaad waxaa loo arkaa midabka cagaarka leh ee madow ee saldhigga asliga ah. Nalalka sidoo kale waa mid aan caadi ahayn, waxay leeyihiin qoollo weyn oo aan lahayn xuduudda jirka ee baska laftiisa. Haddii aad ka saarto lakabka ugu sarreeya ee miisaanka, ciyaarta ciyaar aan cajiib lahayn oo midabkiisu furan yihiin indhahaaga ka hor: midabka basasha wuxuu isbedelaa iftiinka illaa mugdi ilaa hooseeyo.
Ma taqaanaa? Geedka waxaa loo yaqaan "dooxad" mana aha "valotta". Waxay magaceeda ku heshay sharaf ka mid ah botanist oo ka timid Faransiiska, Pierre Vallo, oo markii hore ku sharraxay noocyada kulaylaha. Inkasta oo luuqada loo qoro Valotta.
Vallota waxay leedahay caleemo dhaadheer oo dhaadheer, dherer ahaan, cidhiidhi ah, dhererkoodu wuxuu kala duwanaan karaa 25 ilaa 40 cm. Xayawaanka dab la shidaa hal mar sanadkii. Iyadoo la raacayo shuruucda dayactirka iyo ilaalinta microclimate raaxo leh, ubax waxaa la ogaan karaa ilaa laba jeer sannadkii. Inta lagu jiro ubax ka soo guluubku wuxuu koraa dhumuc qaro weyn oo ku yaala inflorescences la sameeyay.
Ubaxu wuxuu u eg yahay qaabka xiddig, waxa uu leeyahay lix tufaax oo tubaako ah, oo dhexda ku yaala barta dhaadheer iyo dabeecada oo ah qaabka jilicsan iyo midab huruud ah. Mid ka mid ah peduncle wuxuu u bislaan karaa ilaa 9 ubax, ka dib markii foomka sanduuqa ee sanduuqa. Ku hay ubaxyada geedka muddo dheer - 5-6 maalmood. Dabeecadda, qalaad ayaa laga helaa qaab hal qaab ah - dooxo dhoobo ah. Waxaa laga heli karaa xayawaanka qoyan ee Koonfurta Ameerika, Koonfur Afrika (gobolka Cape).
Cudurka Wallo wuxuu leeyahay in ka badan 60 nooc, kuwaas oo afar ka mid ah ay yihiin kuwa ugu caansan:
guduud wuxuu leeyahay caleemo u eg sida caleemo yar oo midab leh oo sharaf leh, oo dhererkeedu yahay ilaa 30 cm Cagaarka ubaxu wuxuu dhacaa xilliga dayrta. Inta lagu jiro muddadaa, dhumuc qaro leh oo leh duufaannada-dalladaha leh dhexroorka 5-6 cm waxay u muuqataa geedka. Ka dib markii ubax, ubaxa waxaa loo beddelaa sanduuq bir ah oo midab madow;
qurux badan: waxaa calaamad u ah caleemaha dhaadheer ee cagaarka cagaaran, illaa 45 cm oo dheer iyo oval, calaacal, waxoogaa calaamad u ah ubaxyo cufan oo midabo kala duwan ah - laga bilaabo casaan cagaaran oo casaan iyo casaan. Nalalka kaliya ee gaadhay qiyaas ahaan 3.5 cm ayaa midabkoodu yahay ubax, 6 dhir, 8 cm dheer, ayaa lagu sameeyay hal buduun;
caddaan: aad u la mid ah ubaxyada cad, taas oo ah sababta ay badanaa ku wareersan yihiin. Sifooyinka kala-duwan ee noocyada noocan ah waa caleemaha cagaaran ee dhalaalaya oo qurux badan oo ubax ah oo hoos ah oo hoos ah. Geedka ubaxyada guga ama dayrta. On the peduncle qaro weyn, qiyaastii 40 cm dheer, 5-7 ubax ayaa la sameeyay;
casaan: noocyada dhifka ah Sida laga soo xigtay calaamadaha dibadda, waxay la mid tahay midkii hore, waxay leedahay caleemo cagaaran oo qurux badan qaabka seefta, si kastaba ha ahaatee, ubaxa wuxuu leeyahay mid aad u jilicsan, hooskii casaan.
Vallota - dhaqanka aan qabyo ahayn iyo daryeelka aan lahayn. Iyadoo la raacayo xeerarka fudud ee content, waxaad ku kori kartaa geedka quruxda leh, kulaylaha leh hodan, ubax dhalaalaya.
First of dhan, ubaxa waa inay bixiyaan iftiin wanaagsan. Tan iyo markii uu ka yimaado kulaylaha, wuxuu jecel yahay iftiin dhalaalaya, khaasatan baahida iftiinka qoraxda subaxda iyo fiidka. Goobta xayawaanka ubaxa leh, daaqadaha dayrta ee koonfur-bari ama koonfur-galbeed ee guriga waa kuwo aad u fiican.
Bakhiriyeyaashu waxay badanaa u koraan ubax sida Surfinia, Begonia, Pelargonium, Calibrachoa, Marigolds, Dahlia, Hortensia, Zinnia, Lobelia, Chrysanthemum, Geranium, Peony, Lily iyo Tulip.
Soo-saarka xad-dhaafka ah ee warshadda qorraxda iyo shucuurta tooska ah ee shucaaca UV laguma talinayo ubax jilicsan, maadaama ay gubi karto. Marka la rakibo dhererka daaqada waqooyiga ayaa iftiimiya iftiin dheeraad ah.
Si loo gaaro dooxo ubax ah, waa lagama maarmaan in la hubiyo heerkulka raaxada. Waqtiga kobaca firfircoon (xilliga xagaaga), heerkulka habboon wuxuu ka +20 ilaa +25 digrii.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in dhaqanka la siiyo heerkul aad u fara badan, maadaama ay dhiman karto.
Xilliga jiilaalka, heerkulku wuxuu yareeyaa + 10 ... +12 digrii, xadka hoose ee +5 digrii waa la ogol yahay. Dhibcaha hooseeya wuxuu sababi karaa nidaamka xididka dufan si uu u qaboojiyo oo u dhinto. Ka dib markii uu joogsado qalabka quruxda badan, wuxuu hibernates, muddadaas oo ah qiyaas ahaan laba bilood.
Dalagyada basasha waxay u baahan yihiin ciidda nafaqada. Ciidda waxaa laga iibsan karaa dukaamo gaar ah ama diyaar u ah madaxbannaan, qaadashada dhul sodan, ciid adag, humus iyo ciid, oo ah saamiga 3: 2: 1: 1. Waa lagama maarmaan in la sameeyo lakabka dheecaan ka hooseeya taangiga, halkaas oo dhirta koraan.
Marka qoynta ubaxa waa inaysan ogolaan in ka badan. Summer waa u baahan tahay waraabinta dhexdhexaad ah, inta jeer ee taas oo lagu go'aamiyo by qalajinta ee lakabka sare ee carrada. Cabbitaanka jiilaalka ayaa lagula talinayaa in la yareeyo. Inta lagu jiro waraabinta dalaggu waa muhiim in la ilaaliyo dheelitirka iyo qoyan sida ciidda u engegan. Ka daadi geedka maaha mid u qalma, sababtoo ah waxay u qabsan kartaa horey iyo dib u caleenta caleenta.
Warshadu maaha mid si gaar ah ugu baahda qoyaanka. Heerka qoyaanka ee ugu fiicani waa 60%. Xilliga kulaylka, waxaa lagula talinayaa in lagu waraabiyo caleemaha miraha leh dhalada leh buufin. Waa lagama maarmaan in la fuliyo qoyaankaas marka ubaxa uu ku jiro hooska, sababtoo ah saameynta qorraxda gubatay waxay ku dhici kartaa caleemaha, qaabka jaalaha ama jaalaha ah.
Ma taqaanaa? Dhulka cimiladu wuxuu ka kooban yahay tirada qoyaanka oo ay ku filnaan karto in lagu daboolo meeraha oo dhan lakabka biyaha oo ka badan laba mitir oo sare..
Nidaamka quudinta ayaa bilaabmaa guga iyo dhammaadka ubax ugu dambeeyey. Bacdamaa Bacriminta ku habboon macdanta, gaar ahaan loogu talagalay ubaxyada xayeysiiska. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa substrates for bulbous. Bacriminta ubaxa waa inay ahaataa hal mar 18-20 maalmood. Dhamaadka bisha Oktoobar, quudinta ayaa la joojinayaa, inkastoo qaar ka mid ah beeraha ubaxa lagu taliyey in ay kordhiyaan inta u dhaxeysa uureysiga iyo sii wadida quudinta dalagga illaa guga.
Akhri xeerarka naas-nuujinta.
Warshadu uma baahna manjooyin. Ka dib markii ubax, waxay diyaarisaa jiilaalka, caleemaha caleemaha iyo hibernates. Waxaa lagu talinayaa in la gooyo caleemaha la qalajiyey ama la qalajiyey, iyo sidoo kale asliga ah, ka dib marka la qalajiyo.
Sida ubaxku u korayo waxaa lagama maarmaan ah in la soo celiyo. Dhaqanka dhalinyarada waxaa lagula talinayaa in aadan taaban 3-4 sano ee ugu horeysa. Markuu guluubku koro, oo wuxuu noqdaa mid gaabis ah, ka dibna dheriga ayaa loo baahan yahay si ballaaran. Ka hor inta aanad ku tallaalin, ka saar geedaha geedaha guluubka, sababtoo ah waxay qaadaan tamar iyo daadi guluubka hooyada. Qaybta sare ee guluubka si buuxda looguma aaso dhulka, si marka dambe waxaad si fudud uga saari kartaa "carruurta." Si kasta ha noqotee, carrada waa la soo dhameeyaa waqti kadibna lumiyaa hantidiisa nafaqada, markaa dhirta waa in si joogto ah loo soo celiyaa. Xilliga ugu fiicani waa hal mar 3-5 sano. Waxaa fiican inaad ka iibsato ciidda dukaanka ama inaad naftaada ku karsato saddex qaybood oo caws, laba qaybood oo dhoobo ah, hal qayb oo mullein iyo hal qayb oo ciid ah. Ha ilaawin samaynta lakabka dheecaan, alaabta ceeriin ah oo la sii ballaarin karo dhoobo, vermiculite, iwm.
Nalalka dhalmada ("kids")
Habka ugu sahlan uguna fudud ee dooxooyinka taranka - "kids" -lukovichkami. Sida caadiga ah, geedi socodka taranka waxaa lagu daraa xubin kaabis. Si arrintan loo sameeyo, basasha waxaa laga soocaa warshad hooyada oo ka mid ah kuwa kaliya ee leh xididadooda ayaa la doortaa.
Nalalka sidoo kale waxay soo saari karaan dhirta sida Babian, Hymenocallis, Fritillaria, Crocus, Drimiopsis iyo Tulip.
Habka soo degitaanka waa sahlan:
In dheri yar oo leh dhexroor ah 8-10 cm ku shubtay substrate diyaarisay.
Basasha dhulka lagu aaso dhulka saddex meelood laba meelood.
Marka xigta, sii warshad leh nalal wanaagsan iyo heerkulka raaxada leh.
Ka dib markii la beero, laguma talinayo in lagu waraabiyo dhirta marar badan. Horeba ka dib 2-3 sano waxaad filan kartaa ubax ugu horeysay.
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneyso ubax, waa inaad isticmaashaa qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, gaar ahaan gacmo-galis, sababtoo ah waa sunta (gaar ahaan nalalka). Marka uu warshadu taabato maqaarka oo ay ku jiraan boogaha yaryar, waxaa laga yaabaa inay uur qaadaan.
Dhibaatooyinka sii kordhaya
In kasta oo xaqiiqda ah in geedi socodka koritaanka iyo daryeellidda wax badan ay tahay mid sahlan, dhaqanku wuxuu leeyahay sifooyinka. Ubaxa ma jecla heerkul aad u sarreeya (oo ka sarreeya +25 digrii), sidaa daraadeed waxa fiican in dib loo habeeyo meel qabow. Dhibaatada joogtada ah ee soo foodsaartay growers flower, waxaa loo arkaa maqnaansho dheer oo ubax ah. Sababtoo ah waxay noqon kartaa awood aad u ballaaran, joogitaanka tiro badan oo "caruur" ah oo aan kala sooc lahayn oo ku saabsan guluubka ama maqnaanshaha xilliga nasashada qaboobaha xilliga jiilaalka. Iyadoo bilowga koritaanka guga, geedka ayaa bilaabmaa inuu daadiyo caleemo - tani waa nidaam caadi ah. Laakiin caleemaha cagaaran ee caleemaha waa inay feejignaadaan, maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa noocyo kala duwan oo cayayaanka ah, oo ay ku jiraan cayayaanka ama cayayaanka.
Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo dhir daaweyn leh diyaar garow gaar ah. Talooyinka mugdiga ah ee caleemaha sidoo kale dhibaatooyinka signalka. Leaves wuu ka sii dari karaa sababtoo ah biyaha, heerkulka hooseeya, heerkulka isbeddelka ah ee deg dega ah. Kadibna waa inaad isbeddesho waraabinta iyo inaad abuurto microclimate gudaha ah.
Mararka qaarkood beeralayda khibrad leh waxay la kulmaan cudurrada dhirta kala duwan iyo cayayaanka. Badanaa dhaqanka waxaa soo weerara caarada caarada. Gossamer cad oo caleemaha ku yaal ayaa tilmaamaya in xayawaanku ku degay iyaga. Si aad uga takhalustid, waa in aad caleenta ku dhaqdaa biyo diirran ama xalinta saabuunta daciifka ah. Iyada oo leh cayayaanka kasta, tusaale ahaan, aphids, gaashaan, mealyworm, waa sahlan tahay in lagu xalliyo iyada oo la daaweynayo ubax leh diyaargarow gaar ah-cayayaanka. Haddii shuruudaha ugu fiican ee lagu ilaaliyo dalagyada la jebiyo, sida heerkulka hooseeya, carrada qoyan, geeddi-socodka goosefactive kala duwan ayaa dhici karta, tusaale ahaan, caaryada cawliga ee fangaska. Waxay muujinaysaa loola jeedo qaabab cagaaran oo qoyan oo caleemo qoyan. Si loola dagaallamo, waxaa la isticmaalaa saabuun iyo xalka fitamiin (2 g oo ah sulphate copper iyo 20 g oo saabuun halkii 1 l oo biyo ah) ama fungicides (Fitosporin-M) ayaa loo isticmaalaa.
Fusarium ama rot-ka casaanka ee saameeya nidaamka xididka ayaa loo tixgeliyaa khatarta geedka. Basasha ayaa istaagaya inay koraan, taarikada caleemuhu way yar yahiin, miisaankuna wuxuu bilaabaa inuu qudhmo. Nasiib darro, fusarium ayaa la ogaadey goor dambe, marka qashinka oo dhan uu ku dhaco. Xaaladdan oo kale, dhirta waa la go'doomiyey, iyo ubaxyo caafimaad qaba waxaa lagu daaweeyaa hab gaar ah - "Fundazol". Vallota waa dhir, qurux badan, qurux badan, oo awood u leh in ay qaataan meel qiimo leh oo lagu ururiyo dhirta guriga. Inkastoo ay jirto niyad jab iyo dib-u-dhac, haddana waa wax aan hoos udhicin oo aan u baahnayn xaalado gaar ah. Adeecitaanka xeerarka sahlan, guriga waxaad ku kori kartaa dhaqan cajiib ah, adigoo isha ku haya ishinka iyo ubaxyada hodanka ah.
Dib u eegista shabakadda:
Nasiib daro weli ma faani karo ubaxyada Vallota, weli waa mid aad u yar, laakiin markii aan ku lahaa ubaxyo qurux badan Vallota, ilaa aan ka sameeyay qaladaad ba'an inta lagu guda jiray isugeynta iyada oo aan ku baabbi'in. Laga soo bilaabo iyada, waxaan ka tagay oo kaliya carruurta yar-basasha.
Vallota waxaa iska leh qoyska Amaryllis, Blooms ka dheeraa Juun ilaa Oktoobar. Marka la beerto, waxaa muhiim ah in qaybta sare ee guluubku ka sarreeyso dusha, waraabinta waa dhexdhexaad, inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxay u baahan tahay waqti nasasho, waqtigan waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo waraabinta iyo heerkulka, waa suurtogal in la oggolaado in caleemaha si buuxda u dhinto. Waa lagama maarmaan in dib loo dhigo wax ka badan 1 mar 2-3 sano. Haddii xaaladaha beerto iyo dayactirka aad sida saxda ah u leedahay, markaa dooxadaadu waa inay bararaan.
Valotta waxay u taagan tahay daaqada bari, waxaan leenahay dabaqa 1aad iyo qorraxda badani maaha. Sanad ka hor, caruurtu aad ayay u daadadeen, guga ayaan ku faafinayaa. Waxaa dhici karta in jiilaalka aad u diiran yahay inuu eedeeyo, iyo xaqiiqda ah in aan ku ridno daaqadaha labajibaaran ee daaqadaha, iyo heerkulka ayaa si wayn kor ugu kacay windowsill. Wuxuu fadhiyaa dheriga 14 cm dhexroor, basal weyn iyo qaybo 5 carruur ah oo yar yar leh caleemo. Waraabiyo sida dhulku u engegay. Horraantii guga, dhammaan ubaxyada waxaa loo wareejiyay bacriminta GREENWORLD ee ulaha, haddii kale waxaan illoobaa in aan iyaga ku quudiyo. Waa hagaag, sidoo kale waxaan si joogto ah u eegay dheriga oo waxaan waydiiyay inay ubaxdo, wayna caawisay! : D